Uru na ọghọm nke nkenke enweghị nkebi akpa - Kuanyu igwe anaghị agba nchara Co., Ltd.
Home » Uru na ọghọm nke nkenke enweghị nkebi akpa
Uru na ọghọm nke nkenke enweghị nkebi akpa
N'ihi na ina mmepụta na Mbelata na-eri nke mmepụta na n'ichepụta, ọtụtụ ahịa gbanwere si mbụ oyi-mmasị enweghị nkebi ígwè anwụrụ zụọ nkenke enweghị nkebi ígwè anwụrụ. Ka anyị a anya na uru na ọghọm nke nkenke enweghị nkebi ígwè akpa:
uru: 1. Nkenke enweghị nkebi anwụrụ akpụ ọsọ bụ ngwa ngwa na mmepụta mmepụta bụ elu. Enweghị etisa mkpuchi, a dịgasị iche iche nke cross-ngalaba nakawa etu esi nwere ike ona chọrọ nke ọnọdụ. 2. The oyi inyefe usoro nwere ike ime ka nkenke ígwè anwụrụ emepụta nnukwu tensile deformation, nke mma mkpụrụ n'ókè nke nkenke ígwè anwụrụ. 3, na nkenke nke nkenke ígwè anwụrụ elu, nke mere na onye ọrụ na-ebelata ọgbọ nke n'efu.
ọghọm: 1. Mmapụta nchegbu dị na ngalaba nke nkenke enweghị nkebi anwụrụ, nke na-emetụta n'ozuzu na obodo buckling e ji mara nkenke enweghị nkebi ígwè anwụrụ; 2. The free torsional rigidity nke ngalaba nke nkenke ígwè anwụrụ bụ dịtụ ala; 3. The oyi-akpọrepu nkenke enweghị nkebi ígwè anwụrụ The akpụ mgbidi ọkpụrụkpụ bụ obere, na ikike na-ebu a local lekwasị ibu bụ ezughi oke.